Iifonti -Idrafti ekwi-Intanethi | I-Creativos kwi-Intanethi (Iphepha 2)
Iimpawu, iifonti, ii-ebook, imixholo kunye nokunye okuninzi simahla kwiFreebiesByPeople
FreebiesByPeople iwebhusayithi entsha ekuzisela zonke iintlobo zomxholo wasimahla onjengemixholo, ii-ebook, iifonti, iimodeli ze-3D nokunye okuninzi.
Ngeeleta zokufaka imibala sikubonisa iindidi ezikhoyo kunye noluhlu lweekhonkco zokuzikhuphela kwaye ube nakho ukuzisika esele ziprintiwe.
I-IKEA yenze uhlobo lwayo lohlobo olutsha olubizwa ngokuba yiSoffa Sans ukuba lufumaneke kuwo wonke umntu, lolona lolonelelo lukhe lwabonwa emhlabeni.
Iifonti zeSans Serif zezo sizibonileyo kwiimovie ezininzi kwaye zisetyenziswa ziimpawu ezinkulu…
Khuphela iifonti zesitayile sebaseball ukuze uzisebenzise kuyilo lwakho kwaye ziya kujongeka zinomtsalane.
Kwi-EnFont eyoyikisayo uya kuba nakho ukusika iifonti ezidumileyo ukuze uzigcine kwaye ube nokwahluka kunokuba kuguquke kunqabile.
UTyp.io yiwebhusayithi entsha apho sinokwazisa khona umthombo wokusicebisa malunga nokuba yintoni enokuba yindibaniselwano enkulu kunye nemizekelo yokwenyani.
I-FontSpark yinkqubo yewebhu esebenza njengekhubalo kwaye eya kuthi isinike izimvo ngokungqinelana nesihloko esithile kunye neminye imikhondo ekufuneka siyinike yona.
Ukuba unayo iakhawunti yasimahla ye-Adobe Cloud ungasebenzisa ilayibrari esisiseko yeefonti ze-Adobe, igama elitsha leTypekit.
Ukuba ujonge inkuthazo yomthombo wakho olandelayo wewebhusayithi, olu phononongo olwenziwe yi-Icons8 kufuneka ukuba uqhubeke.
Ivenkile yamahala kunye neefonti ezifanelekileyo zeyona projekthi yoyilayo unazo engqondweni. Olu luhlu lulandelayo lweefonti esizibonelelayo kwi-Intanethi kwi-Intanethi lolunye lwezona zikhetho zibalaseleyo esizifumeneyo.
Ngaba uyafuna ukukhuphela iifonti simahla? Apha unengqokelela elungileyo yeefonti zangoku nezasimahla eziya kuba yinxalenye yoluhlu onalo kuzo zonke iintlobo zabaxhasi kunye nemisebenzi.
Imikhwa yokuchwetheza eya kubaluleka kuyilo lwe logo yakho okanye imiyalezo enobuqili, kodwa ukuba usebenzisa ezi zilishumi kulo nyaka, ziya kukwenza ukuba ulungele umxhasi wakho.
Iifonti zasimahla ezingama-39 zokuzisebenzisa ezizodwa ongenakuphuthelwa. Ngabo uya kufumana ukuba amakhadi akho eKrisimesi anokuchukumisa okukhethekileyo.
Ifonti entsha ye-BBC
I-BBC yaqesha istudiyo saseDalton Maag ukutolika kunye nokwenza ifonti entsha ye-BBC Reith enezinto ezilungileyo zomseki welo thuba.
Ngokugqibeleleyo iifonti zasimahla ukuze uzonwabele emsebenzini wakho. Iya kukholisa zonke iintlobo zabafundi, ke ayifanelanga ukuba ilahleke kwilayibrari yakho.
Iifonti ezintsha ziya kunika ixabiso elikhulu kwiiprojekthi zakho zoyilo kwaye ezingafanelanga ukuba ziphoswe kwithala leencwadi lakho ziya kuba zezi zilandelayo, ke qaphela.
Ngaphakathi kwimithombo esiza kuyikhankanya, uya kuba nakho ukufumana izimbo ezininzi, umzekelo: ezintle, zase-Egypt, ezihlekisayo, njl.njl.
Iifonti ezenziwe ngesandla ezingama-60
Ukhangela ifonti yokubhala ngesandla? Ungaphoswa yingqokelela yethu yamagama angama-60 abhalwe ngesandla alingisa isicatshulwa esibhalwe ngesandla ngokwendalo.
Khuphela iifonti ezingama-25 zakudala zecalligraphy eyilelwe ngokukodwa ubugcisa bokuzoba kwaye uzisebenzise kuyilo lwakho nasekubhaleni, zisimahla.
Umkhwa omtsha ufikile kwaye kuya kufuneka ubhale ngeendlela ezahlukeneyo zeefonti kunye neefonti zikaGoogle, ukuya kuthi ga ngoku yeyona nto ibalulekileyo.
Kolu qulunqo senza umsebenzi kuwe kwaye sazisa iifonti zethu ezi-5 ozithandayo ezivela kwiifonti zikaGoogle, chwayita ukwazi ukuba siyavumelana nawe.
I-Futuracha yile: ngumthombo wenguqulo ehonjisiweyo kunye nokuphefumlelwa kobugcisa be-art-deco ye-muse engalindelekanga: iphela leCaribbean.
I-Calligraphy ithathwa njengengcamango ngaphezu kobugcisa, kuba ngathi ngamnye wethu uzimele ngokubhala kwethu.
Ukudibanisa ngokuchanekileyo iifonti ezahlukeneyo kuyilo lwegraphic?
Bangaphi oomatshini bokuchwetheza abaya kufaneleka emsebenzini? Njengomgaqo oqhelekileyo, ngaphezulu kweefonti ezintathu kunokuba yinto yokubulala ngaphezulu, ke qaphela.
Ukuba uyigrafiki okanye uyilo lwewebhu, kuya kufuneka uyazi ukuba kukho izibonelelo ezahlukeneyo kunye nezixhobo zamva nje ezisimahla zokukhuphela.
Siza kukubonisa izixhobo eziza kukunceda uqaphele iifonti enemifanekiso ukuze wazi ukuba loluphi uhlobo lohlobo olusebenzisayo.
Sonke esazi okuncinci malunga noyilo siyazi ukuba akufuneki sisebenzise ngaphezulu kweefonti ezintathu kuyilo, kungenjalo kuya kubonakala ngathi kulayishwe kakhulu.
I-Helvetica inohlobo lwefonti ngaphakathi kwemvelaphi yayo, ekwaziyo ukwenza ulwimi lwangoku kunye nolwangoku.
IiComic Sans ziye zaba zezona ndawo zichanekileyo emhlabeni zoyilo lwegraphic, njengoko iyifonti yabantwana.
Kwaye ukufumana indlela, okwabizwa ngokuba yinkqubo yokubonisa, ineyona njongo iphambili yokunceda ekuphuhliseni iinkqubo ezifanelekileyo zokuqhelanisa
Kuyilo lwegraphic kubaluleke kakhulu ukuyazi imigaqo eyahlukeneyo yokuchwetheza, kuba yenza umsebenzi ube lula kakhulu.
Ukuphefumlelwa kwamaphepha oPapasho Yintoni oya kuyidinga ngexesha lomsebenzi woYilo loMzobo
Kule nqaku, uza kwazi amanye amaphepha okhuthazo alungileyo oza kuwadinga ngexesha lomsebenzi wobugcisa bokuzoba.
Kumsebenzi wakho udinga ngaphezulu koyilo olulungileyo okanye ukubhala okuhle ukudibanisa abantu, yiyo loo nto iifonti zibaluleke kangaka.
Ngohlobo lohlobo lweRyman uya konga ukuya kuthi ga kwi-33% ye-inki kwiiprojekthi zakho zemizobo. Khathalela iplanethi ngokusebenzisa uhlobo lochazo lwendalo.
Iifonti zasimahla kunye ezahlukeneyo
Ukusetyenziswa kwezi fonti zasimahla kuya kwenza umsebenzi wakho kunye neeprojekthi ziyeke ukudika kwaye ziya kwahluka ngokupheleleyo kule ikhoyo namhlanje.
Iingcebiso ezisixhenxe ezilula ukuze ukwazi ukuphucula ubuchwephesha bakho kwizixhobo eziphathwayo kwaye kwangaxeshanye uphucule ukumiswa kwazo.
Ukudibanisa iifonti yinto enokuphucula uyilo lwakho, kodwa kunokuba yinkqubo entsonkothileyo ukukhetha ukuba loluphi uhlobo lwamagama ahamba kakuhle, ke qaphela.
Uyikhetha njani ifonti efikelelekayo
Ukubaluleka kweeleta oza kuzisebenzisa xa usenza iprojekthi okanye iwebhusayithi yakho kubaluleke kakhulu, kuba oku kungonakalisa yonke into
I-typography sisalamane esinamandla xa kufikwa ekuthumeleni imiyalezo, ukufunda ukuyisebenzisa ngokuchanekileyo yimfuneko esisiseko yoyilo ngokuchanekileyo.
Ukuba ujonga ifonti yasimahla entle ebonisa iigrafu kunye namaxabiso kunye nemigca ngaxeshanye, iDatalegreya yinto ekufuneka uyenzile.
Kule posi sinokufumana ukhetho lweealfabhethi zeediliya, nokuba uyakuthanda ukubhala amagama okanye ufuna nje inkuthazo, le yiposti yakho
Namhlanje sikulethela olu khetho lweefonti zasimahla ekusetyenzisweni kaninzi, zonke zinomgangatho ophezulu kunye nokusebenza ngokuchaseneyo, okubenza babonakale.
Iifonti ezili-10 zasimahla zeRetro ekufuneka uyazi ewe okanye ewe
Ukuba ujonga umgangatho wefomathi weetro vintage osimahla kwaye owahlukileyo, nayiphi na kwezi 10 iya kuba ilungele wena.
Ezi fonti zili-10 zilungele naluphi na uhlobo lomsebenzi njengoko zisimahla kwaye zinomgangatho ophezulu kuzo zonke iindlela zakho.
Iifonti zobugcisa ezi-7 okanye iifonti eziyiliweyo
Ukuba ujonga ubungakanani obuphezulu, ifonti engenasimahla, ngokuqinisekileyo enye yezi sixhenxe inokuba lulotyalo-mali lwakho olulandelayo.
Iifonti zeCalligraphy, kukho zonke iimilo kunye nezitayile, kodwa ezi zintandathu zinomgangatho ophakamileyo kwaye zinobuhle obukhulu kuzo zonke iintlobo zemisebenzi.
Ifonti yiplagi yeFotohop ekuvumela ukuba ufikelele kwiifonti zikaGoogle ezingaphezu kwama-700 simahla kuhlobo luka-2014/2015 lwePS
UKUBA ufuna inkqubo eyenza kubelula kuwe ukwenza iifonti ezikumgangatho ophezulu kwi-Illustrator, kwiFontiyo yakho impendulo
Iifonti zasimahla, ezikumgangatho wobuchule wakhe wonke umntu. Qhubeka ufunda!
Iifonti ezili-15 ezifanelekileyo zeKrisimesi
Ukukhethwa kweefonti ezili-15 ezifanelekileyo zeKrisimesi kunye neeprojekthi zeKrisimesi ezinje ngokuvuyisana okanye iiflaya. Qhubeka ufunda!
Kule veki sikuphathela imithombo emithathu emitsha enxulumene nehlabathi lekhompyuter, ukuze umsebenzi wakho ube nefuthe lobuchwephesha
Kule veki sikuphathele iifonti zecalligraphy, zibonakaliswa ngokuba mhle kakhulu, ngakumbi oonobumba abakhulu
Ukudityaniswa kweefonti zasimahla zesinema ukusebenza kwiiprojekthi ezintsha kwaye usikhuthaze xa usebenza kumzobo weMash-Up.
Iifonti ezili-10 ezibalulekileyo okanye iifonti zoyilo lwegraphic namhlanje, phakathi kwazo oya kuthi ufumane i-lobster okanye i-helvetica
Ukuqokelelwa simahla kweefonti zobungcali zoyilo lwewebhu. Fumana umthombo olungileyo wokujongana neeprojekthi kunye noyilo lwewebhu.
Ukudityaniswa simahla kweefonti zobungcali ezingaphezu kwe-100 ezifanelekileyo kuyilo lwewebhu.
Iifonti ezisibhozo ezithandwayo nezisetyenzisiweyo namhlanje
I-8 yezona zinto zaziwayo nezisetyenziswa kakhulu phakathi kwabaqulunqi kunye nabasebenzisi abaqhelekileyo
Ngaphezulu kwama-45 akumgangatho ophezulu kunye neefonti zasimahla ezinokuza ngokufanelekileyo kwiiprojekthi zakho zobuqu okanye zorhwebo
Ipakethi yeefowusta zentengiso ezingamashumi amane kunye neeflaya ezifanelekileyo kubaqalayo kwihlabathi loyilo lwegraphic. Isimahla kwaye iyahlelwa.
Ipakethe yeefonti ezingaphezulu kweshumi elinesihlanu lamakhulu kuyilo lwegraphic. Ukudityaniswa okukhulu kunye neefonti ezahlukeneyo simahla.
Ukudityaniswa okukhulu kweefonti zasimahla ezingama-77 esizipapashileyo ngo-2014, zonke zikwisithuba esinye ukwenza ukhuphelo lube lula ngakumbi. Zonwabele.
Ngaba umbono wokuyila owakho ubuchwephesha ubhena kuwe? Yilwe ngeGlyphr, umhleli weponti wefonti yasimahla. Qhubeka ufunda kwaye ufumane esi sicelo.
Uthanda iifonti zasimahla. Ngenisa esi sithuba kwaye ufumane iifonti ezi-5 zango-2014 zendalo yakutshanje kwaye ezingaziwayo. Umoya opholile!
Iifonti ezisixhenxe zoSuku lweValentine
Ngale Februwari 14 kuyakufuneka uyile into. Apha sicebisa iifonti ezisixhenxe zoSuku lweValentine ngokukhuphela simahla. Zonwabele!
Ukunika ipowusta amandla ayimfuneko ayisiyonto nje yemifanekiso, okanye imibala. Kungenxa yoko le nto sikuphathela iifonti ezi-5 zokukhuphela simahla. Zonwabele.
Ukuba usengomnye wabo basebenzisa iVerdana okanye iArial kumaphepha abo ewebhu, ukusuka apha sicebisa ukuba ubambe kwezi fonti ziyilo zisibhozo zewebhu.
Ukuze ungachithi ixesha lokukhangela nokukhetha, sikuzisela iifonti zasimahla ezi-7 ukuze uzikhuphele ngokuqhwanyaza kweliso.
Enye yezona zinto zifunwa emva kwezixhobo zoyilo lwegraphic yifonti yasimahla. Apha uya kufumana iifonti ezili-10 oza kuzisebenzisa nangona ufuna njalo.
Ngaba ujonge iifonti zasimahla onokuzikhuphela? Apha uyifumene blog efanelekileyo Saga. Rhoqo ngolwesiHlanu, sipapasha iintlobo ezi-5 ezahlukeneyo simahla. Thatha isithuba se.
Iindidi ezahlukeneyo zeefonti zasimahla ezikhoyo kwiwebhu ziyaziwa kakuhle, oko kuthetha ukuba abaqulunqi bemizobo banethuba elikhulu lokufumana kuphela uhlobo lohlobo oluhambelana neemfuno zeprojekthi yabo.
Uncedo lokuchwetheza kukuba kusivumela ukuba sifumane uyilo lweendlela ezahlukeneyo kunye ezahlukeneyo, ke kulula ukufumana uhlobo lwefonti elungele iprojekthi yethu. Kule meko, namhlanje sizisa iifonti ze-5 simahla kwi-Photoshop kwaye senze imifanekiso enesitayile sayo.
Iifonti zasimahla ezisetyenziselwa ukurhweba simahla
Namhlanje unethamsanqa: uza kufumana elona phepha lilungileyo lokufumana iifonti zasimahla zokusebenzisa simahla urhwebo. Iluncedo, akunjalo?
Ukuba usebenza kwiprojekthi kwaye ufuna ukusebenzisa ifonti yasimahla nevulekileyo kuyo, jonga kwiFira ​​Sans yeFirefox OS.
Isifundo esisisiseko sokusetyenziswa ngokuchanekileyo kweKhathalogu yefonti ethi iMac yethu izise ngokwakhona. Funda ukulawula iifonti yakho kakuhle.
Kule posi sithetha ngamagama kunye nendlela yokuwalawula, ngothotho lweengcebiso ezibandakanya izikhombisi kwiinkqubo zokuququzelela umbutho wazo.
Iingcebiso ezibaluleke kakhulu malunga nokuchwetheza kwabaqulunqi: ubume, umbala, izinto ezintsha, i-aesthetics, ubungakanani ...
Isifundo seFotohop sokwenza isicatshulwa sentsimbi
Ukuqokelelwa kweefonti zokuyila zasimahla ezingama-22 kunye nezinto zoqobo zokukhuphela
Iifonti ezinkulu eziSimahla zeeYilo zakho
Esinye sezixhobo ozifuna kakhulu ngamagama asimahla, kwaye kukho ingqokelela elungileyo yeefonti ...
Iifonti zomdlalo bhanyabhanya ezingama-20 onokuzikhuphela simahla
Iifonti eziSimahla ezi-10
Uyilo olukhulu alunamsebenzi ukuba xa usebenzisa ifonti senza ukhetho olungalunganga, into ...
Uhlobo loYilo: UTom Carnase, uHerb Lubalin, kunye noMorris Fuller Benton
Abaqulunqi be typographic
imizekelo yeendidi ezahlukeneyo zokudityaniswa
lwenziwa njani uhlobo lohlobo lwehlabathi
Iifonti ezili-10 zasimahla ezikumgangatho ophezulu
Kwimithombo elungileyo akukho ngxaki ekuhlawuleni isixa semali esifanelekileyo, kodwa ukuba singasifumana ...
ukuthanda ukwazi kunye nezinto ekufuneka uzazi malunga nokuchwetheza
Ii-capitulars kunye nohlobo lwazo
oonobumba abakhulu neentlobo zabo ezintathu
iziseko zokugwetyelwa kweetekisi
Uhlobo lokuchwetheza (icandelo III: Icandelo labalinganiswa, umahluko phakathi kweefonti)
Iifonti ezi-6 ezothusayo zeHalloween
Okwangoku uya kuyazi ukuba yeyiphi i-serif ekwifonti, kodwa nje ukuba siza kuyinika ...
Iifonti ezingama-25 zeRetro zokuqokelela kwakho
Akunyanzelekanga ukuba ube ngumlandeli webhlog yemihla ngemihla ukuze uqonde ukuba siyazithanda i-retro kunye…
Imizekelo engama-30 yamagama asetyenziswe kakuhle kuyilo lweWebhu
Ayingomsebenzi olula ukusebenzisa ifonti elungileyo kuyilo lwewebhu, kwaye isifundo siyanzima ...
I-typography Dose: Iifonti ezili-10 zoLonwabo
Iifonti ezili-10 ezihlekisayo kwiimilo zazo ezinokusetyenziselwa naluphi na uhlobo loyilo lweholide.
Iifonti ezingama-40 ezigqwesileyo zoyilo oluncinci
Nangona besiyishiyile ecaleni kancinci, ndiyakholelwa ukuba nabani na ongena kwiwebhu kwaye ngakumbi ...
Ukuba uyila iifonti njengezinto zokuzonwabisa okanye umsebenzi owuqeqeshelweyo, ngokuqinisekileyo uya kuba nomdla wokwazi ukuba ungazithengisa iifonti zakho kwi-Intanethi kumaphepha akhethekileyo
Uyilo lweTypography ibisoloko sisihloko esitsalileyo, ibisoloko ...
Imizekelo engama-30 yomsebenzi omangalisayo wokuchwetheza
Ndihlala ndikuxelela ukuba ukusebenzisa ifonti elungileyo kubaluleke kakhulu xa kuyilwa, kodwa inye into ...
Kuyinyani ukuba ama-99% abaqulunqi baneemanuia zeComic Sans typography njengakwi ...
Iifonti ezingama-20 zamahhala ezingenazifayile zokukhuphela
Kwi-Ateneu edumileyo bayishiya ikhonkco kukhetho olukhulu lweefonti zosapho zakwaSans Serif zasimahla. Oku…
Kwibhlog elula Izinto ndizifumene ezinomdla ngokwenene, ayizizo iibrashi, ayizizo izithambiso, okanye izimbo, hayi ...
Iifonti ezinkulu ezingama-20, ezibanzi nezinkulu
Kwi Oh! Imizobo, iKozmica yenze ingqokelela enkulu yamagama angama-20 eBold Bold, oko kukuthi, enkulu, echubby, ...
Iifonti ezingama-45 ezilinganisa ukuzoba okanye ukubhala ngesandla
Uhlobo lohlobo olulinganisa iileta ezenziwe ngesandla, oko kukuthi, ngokungathi besizibhalela ephepheni, yiza kakhulu ...
Iifonti ze-grunge ezingama-54 zamahhala
Kwizixhobo ezingamawaka basishiyela ikhonkco ekuhlanganisweni kweefonti ezi-50 ezigqithileyo ezifanelekileyo ngakumbi kuyilo, kuba ...
Iifonti zasimahla zoyilo zale mihla
Ukuba ufuna umthombo olungileyo wokukhuphela simahla kuyilo lwala maxesha namhlanje, ungathenga enye yezi ...
Hombisa uyilo lwakho ngezi fonti zeKrisimesi onokuzikhuphelela simahla kwaye uzifakele kwiifestile zakho ngokulula….
Owu Grafico, wabelane ngeqoqo leefonti ze-gothic onokuzikhuphelela simahla ukuba uzifakele kwikhompyuter yakho. E…
Iifonti ezingama-40 zegrunge
I-Blogthememachine, ingqokelela evela ku-dafont.com, iifonti zesitayile ezingama-40 ezikrwitshiweyo (grunge) ezinokunika umnqweno okhethekileyo kuyilo lweedolophu okanye ...
IMegapack yefonti yasimahla yoyilo lwakho
Nantsi iphakheji yemigca ukuze uzisebenzise kuyilo lwakho. Ipakethi izisa amawaka ...